Umhlaba wokuthengisa uyathengiswa e-Bangalore, Karnataka
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iqashiso lomhlaba Umhlaba wo kuhlala Karnataka Bangalore
Umhlaba wo kuhlala
I-1-10 yoluhlu lwe-195
Iiplani zeZiza kwi-elektroniki iSigaba 1, I-Bangalore
It has an area of 775 sqft and is priced at Rs 41 89 lac The amenities include 24 x 7 security, health facilities, banquet hall, badminton court , basketball court , game room, jacuzzi, swimming pool, steam sauna and sports facility The time you'll spend here will become the greatest moment of your ...
Published by Propaddress Concierge Pvt Ltd
umbono Umhlaba wo kuhlala ishicilelwe iintsuku 4 eyadlulayo
A plot is available for sale in The Address Maker The Lake View Address Plots, Electronic City Phase 1, Bangalore It has an area of 2400 sqft The property is available at a price of Rs 1 42 cr It has aerobics and yoga as well as jacuzzi The project also has club house, maintenance staff, health faci...
Iiplani zeZiza eDevanahalli, Bangalore
Esi sakhiwo sihleli kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, Bangalore Inendawo enesalfure ye-1346 sqft kwaye ifumaneka ngexabiso le-Rs 4,380 nge-sqft nganye inomkhondo wejogging kunye neempawu zamanzi iprojekthi ikwanekreyikhi yeqakamba, i-adventurous imidlalo, inkundla yebhola, inkundla ye-futsal, ...
Ipropathi yesiza siyathengiswa kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, e-Bangalore Inendawo engama-3496 sqft kwaye amaxabiso nge-Rs 1 62 cr Inepaki ye-refexology kunye nenkundla ye-futsal, imigodi yesanti iprojekthi inomoya ovulekileyo ithiyetha, inkundla yebhola yevoli, ipaka yeyoga, incoko ...
Ipropathi yesiza ifumaneka ngokuthengiswa kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, e-Bangalore Inendawo engama-2032 sqft kwaye ixabiso layo li-Rs 95 35 i-lac Izixhobo zibandakanya indawo evulekileyo yaseshilini, indawo yokubhukuda, inkundla ye-tennis, ukukhwela ilitye, abantwana indawo, imiyezo egadiweyo, indawo yokuzivocavoca, joggi ...
Esi siza sithengiswa kwaye sikwindawo ye-Century Real Estate Sports Village, yenye yeeprojekthi eziqinisekileyo zase-Devanahalli Inendawo engama-2247 sqft Lo mhlaba uyafumaneka ngexabiso lee-Rs 96 10 lac Inendawo yokuzivocavoca kunye namanzi Iiprojekthi inamandla okugcina, ...
Isiza siyathengiswa kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, Bangalore Inendawo enesalfabhile ye-1165 sqft kwaye ifumaneka ngexabiso le-Rs 4,821 nge-sqft nganye ibeke okuluhlaza, ukucheba kunye nenkundla yebhola yebhasikiti, ivenkile elula Le projekthi inenkundla yefitsal, imigodi yesanti, ...
Esi sakhiwo sime kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, Bangalore Inendawo eyi-1593 sqft kwaye ixabiswe nge-Rs 75 51 lac Inephunga elimnandi kunye nepakethi yebhabhathane ngokunjalo nokubeka okuluhlaza, irobhothi le projekthi inepaki yemango. inkundla yetenisi, ukukhwela ilitye, incoko ...
Isiza siyathengiswa kwi-Century Real Estate Sports Village, eDevanahalli, Bangalore Inendawo efanelekileyo ye-2353 sqft kwaye iyafumaneka ngexabiso le-Rs 4,673 nge-sqft nganye inenkundla ye-futsal, imigodi yesanti kunye nendlu yeklabhu. Unomdlalo weqakamba wokudlala ibhola ekhatywayo, imidlalo yeqela, umdlalo wokubaleka, 24 ...
Esi siza sithengiswa kwaye sikwindawo ye-Century Real Estate Sports Village, yenye yeeprojekthi ezibalaseleyo zeDevanahalli Inendawo yokubaleka kunye nendawo yemidlalo yeqonga evulekileyo Iprojekthi inokhuselo lwe-24 x 7, indawo yokudlala yabantwana, ipaki ye-refexology, umdlalo weqakamba, imidlalo yeqela, ...
I-Bangalore, eyaziwa ngokusemthethweni njenge-Bengaluru ([ˈbeŋɡəɭuːɾu] (mamela)), ikomkhulu lelizwe laseIndiya iKarnataka. Inabemi abangaphezu kwezigidi ezilishumi, isenza ukuba ibe yimigacity kunye nesesona sixeko sineqela elinabantu abaninzi kunye nolwesihlanu olona hlaselo lukhulu lwedolophu eIndiya. Ime kwi-Indiya esemazantsi e-India, kwi-Deccan Plateau kwindawo ephakame ngaphezulu kwe-900 m (3,000 ft) ngaphezulu komphakamo wolwandle, owona uphakamileyo phakathi kweedolophu ezinkulu zaseIndiya. Isimo sayo sobuhlanga obahlukeneyo, esineenkolo ezahlukeneyo, kunye nesizinzileyo sibonisa ukubakho kweetempile kunye ne-1000, i-400, i-100, iicawe ze-40, i-741 Jain derasars, ezintathu ze-Sikh gurdwaras, ezimbini ze-Buddhist viharas kunye netempile enye yomlilo we-Parsi. I-XNUMX km² yedolophu. Iindawo zonqulo ziphinde zimelwe yiChabad ecetywayo yoluntu lwamaJuda. AmaBahá'ís amaninzi anoluntu ekuthiwa liziko leBahá'í. Kwi-1537 ye-CE, u-Kempé Gowdā - umlawuli we-feudal phantsi koBukhosi baseVijayanagara-waseka inqaba yodaka ethathwa njengesiseko se-Bengaluru yanamhlanje kunye neendawo zayo ezindala okanye iiPetes ezikhoyo ukuza kuthi ga ngoku. Emva kokuwa kobukumkani baseVijayanagar ngenkulungwane ye-16th, ama-Mughals athengisa i-Bangalore kwi-Chikkadevaraja Wodeyar (1673-1704), umlawuli we-Kingdom of Mysore kwi-lakh rupees ezintathu. Xa uHaider Ali ebamba ulawulo lweMysore, ulawulo lweBashda lwadlula ezandleni zakhe. Yathatyathwa yiNkampani yeBritish East India emva kokuphumelela kwiMfazwe yesine yeAnglo-Mysore (1799), ebuyisele ulawulo lwesixeko kwiMaharaja yaseMysore. Isixeko esidala siphuhliswe kwimimandla ye-Maharaja yaseMysore kwaye senziwa ikomkhulu lePrincess State yaseMysore, eyayikhona njengeqonga elizimeleyo leBritish Raj. Kwi-1809, amaBritane ayitshintshela e-Bangalore, ngaphandle kwesixeko esidala, kwaye idolophu yakhula ngeenxa zonke kuyo, eyayilawulwa njengenxalenye yeBritish India. Ukulandela ukuzimela kwe-India kwi-1947, i-Bangalore yaba likomkhulu le-Mysore State, kwaye yahlala iyikapitali xa kwakhiwa i-India entsha ye-Karnataka kwi-1956. Iindawo ezimbini zasedolophini zaseBashington - isixeko kunye nokuvalwa umlomo - ezaziphuhliswe njengeziko elizimeleyo elidityaniswe kwiziko elinye ledolophu kwi1949. Igama elikhoyo laseKannada, i-Bengalūru, labhengezwa njengegama elisemthethweni lesixeko kwi2006. I-Bengaluru ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi "Silicon Valley of India" (okanye "IT capital of India") ngenxa yendima yayo njengothunyelo lwangaphandle lobuchwepheshe be-teknoloji (IT). Imibutho yasebuchwephesha yaseIndiya i-ISRO, i-Infosys, i-Wipro ne-HAL iphambili esixekweni. Isixeko esihluke ngokwentando yesininzi, I-Bangalore yeyona dolophu inkulu ngokukhawuleza e-India. I-Bengaluru yenye yezona zinto zifundwe kakhulu apha emhlabeni. Likhaya kumaziko amaninzi emfundo kunye nophando, afana ne-Indian Institute of Science (IISc), i-Indian Institute of Management (I-Bangalore) (IIMB), iZiko leLizwe leTekhnoloji yoLwazi, i-Bangalore (IIITB), iZiko likazwelonke leTekhnoloji yeTekhnoloji, e-Bangalore, IZiko leLizwe lezeYilo, iBhakabhaka (Ikhampasi ye-NID R&D), kwiSikolo seLizwe leYunivesithi yaseIndiya (i-NLSIU) kunye neZiko leSizwe lezeMpilo yeNgqondo kunye neNeososcience (NIMHANS). Inani leenqwelo moya eziqhutywa ngurhulumente kunye nemibutho yezokhuselo, enje ngeBarat Electronics, iHindustan Aeronautics kunye neLebhu yeLizwe yeAerospace ekwesi sixeko. Isixeko sikwagcina umzi-mveliso weefilimu waseKannada.